Gamer တွေတအားကြိုက်တဲ့ Lenovo ရဲ့ Legion Y540 Gaming Series လေးကို Cashback Promotion ပေးနေပါပြီဗျာ🎉🎉 ဘယ်အမျိုးအစားတွေကို ဘယ်လို CashBack ပေးနေတာလဲ..? Legion Y540 GTX graphic နဲ့ကို Cashback 100 USD...
Customer တွေအရမ်းကြိုက်ကြတဲ့ Lenovo ရဲ့ Thinkcentre M720T Desktop လေးကို Discount ပေးနေပါပြီဗျာ🎉🎉🎉 Online Learning တွေလုပ်မလား……
Premium ဆန်တဲ့ ခံစားချက်ထက် ပိုကြမ်းမဲ့ Lenovo ရဲ့ Thinkpad X1 Cabron Series 💻💻💻 Lenovo ရဲ့ ThinkPad X1 Carbon ကို military-grade အဆင့်ရှိတဲ့ စမ်းသပ်မှုများစွာနဲ့ စစ်ဆေးထားပြီး
ရောက်ပီတဲ့ဗျို့ ……ကြမ်းမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် Lenovo ရဲ့ Gaming အသစ်စက်စက်ကလေး ရောက်ရှိလို့လာပါပီနော်🛬 ဘယ်လိုတွေကြမ်းမလဲဆိုတာကတော့ ⬇️⬇️ ပထမဦးဆုံး အရင်ခေါ်နေကြ နာမည်တွေနဲ့မတူတော့ပဲ အခုရောက်လာတာလေးကတော့ Lenovo Gaming3လို့ခေါ်ပါတယ်👈
Gaming Laptop ရောက်ပီလားလို့ ခနခနမေးနေကြတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် Legion5လေးရောက်ရှိလာပါပီနော်💁‍♂️ Gamer သမားတွေအတွက် ဆိုပေမဲ့ video editing သမားတွေ Engineering အသုံးပြုတဲ့ သူတွေအတွက်လဲ အလွန်အသုံး၀င်ပါတယ်နော်☺️ AMD CPUဖြစ်တဲ့ Ryzen5(4600H) နဲ့ အတူ NVIDIA GeForce GTX 1650 Graphic card ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် Game အကြမ်းကြီးတွေပဲဆော့ဆော့ Editing software တွေပဲသုံးသုံး အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်နော် 🙆‍♂️
ပါးပါးလေးနဲ့ ကြမ်းတဲ့ Lenovo ရဲ့ Thinkpad X395T 💻💻
ကဲ့ gamers သမားတွေ ပါးစပ်ဖျားက မချလောက်အောင် မေးနေကြတဲ့ Lenovo legion5လေးဟာဆိုရင်ဖြင့် မကြာခင်ရောက်ရှိတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်👍 နောက်ဆုံးထွက် AMD CPUဖြစ်တဲ့ Ryzen5(4600H) နဲ့ အတူ ကောင်းမွန်တဲ့ cpuထဲကတစ်ခုနဲ့ အကြမ်းစား game တွေကိုဆော့ကြမယ်နော်☺️ Gamers တွေအတွက်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူးနော် ...
Thinkapad ကိုအားပေးကြမ်းတဲ့ပရိတ်သတ်လေးတွေရှိလား…🤔 Thinkpad ကိုအားပေးကြမ်းတဲ့သူတွေဆိုသိမှာပါ
All In One PC ဆိုတာဘာလဲ?
Lenovo ရဲ့ ဒီ Gaming အသစ်က နည်းနည်းကြမ်းမယ် 😎 ဘယ်လိုတွေကြမ်းမလဲဆိုတာကတော့ ⬇️⬇️ ပထမဦးဆုံး အရင်ခေါ်နေကြ နာမည်တွေနဲ့မတူတော့ပဲ အခုရောက်လာတာလေးကတော့ Lenovo Gaming3လို့ခေါ်ပါတယ်😉
အကြမ်းကလည်းခံ အရည်အသွေးကလည်းမြင့် ရုံးတွက်ရောအိမ်တွက်ပါ အဆင်ပြေမဲ့ Lenovo ရဲ့ Desktop လေး M920T ❤️ ဒီ M920T Desktop လေးက တကယ်ကိုရိုးရှင်းလှပပြီး အကြမ်းခံ Material တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Designလေး🤤 Design တင်လန်းတာမဟုတ်ဘူးနော် အတွင်းပိုင်းမှာသုံးပေးထားတဲ့ Performance တွေကလည်းအလန်းဗျာ😍
Gamer တွေတအားကြိုက်တဲ့ Lenovo ရဲ့ Legion Y540 Gaming Series လေးကို Cashback Promotion ပေးနေပါပြီဗျာ🎉🎉 ဘယ်အမျိုးအစားတွေကို ဘယ်လို CashBack ပေးနေတာလဲ..?
All In One PC ကိုမှတောင့်တနေတဲ့ အပေါင်းသင်းရောင်းရင်းတို့အတွက် ဒီမှာ Lenovo ရဲ့ V530 All In One လေး လာပီဗျာ…
Movieတွေ Music Video တွေ Youtube Video တွေကိုကြည့်မလား❓ ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့Video Callပြောတဲ့အခါ Screen Size ကြီးကြီးနဲ့ပြောမလား❓ သားသားမီးမီး ကလေးလေးတွေကိုပဲ Game ပေးဆော့မလား❓... ဘယ်လိုသုံးသုံး ရုံးမှာရောအိမ်မှာရော အဆင်ပြေမဲ့ Tablet လေးကတော့ lenovo ရဲ့ Tab M8 ပေါ့ဗျာ📱 Body ကကျစ်လစ်ပေါ့ပါးပြီး Screen Size ၈ လက်မကို HD Display ရတယ်🎞 Dolby Atmos® အသံစနစ်ကြောင့် ရုပ်ရှင်ရုံထဲကို ရောက်သွားသလို ခံစားရမဲ့ Dispaly နဲ့ ပတ်ပတ်လည်အသံကိုရမှာဗျို့🎥 Wifi , Bluetooth ရပြီး 4G LTE လည်းSupport ပေးဦးမယ်
Thinkbook မှ မရရင် Laptop မကိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အမျိုးတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးရှိတယ်ဗျို့😋 ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သတ္တုရောင်လေးနဲ့ မကြာခင်ရောက်ရှိတော့မယ့် Thikbook_14 က ထက်မြက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေ သင့်အတွက် ယူဆောင်လာပေးမှာပါ💁‍♂️ Thinkbook 14 လေး ...
Thinkpad ကောင်းကောင်းလေးလည်းကိုင်ချင်တယ် Budget လည်းချွေတာချင်တဲ့သူတွေအတွက် Thinkpad E14 ကို‌ လမ်းညွန်ပါရစေ🙋‍♂️ Thinkpad E14 ရဲ့ Body ကိုအလူမီနီယံနဲ့လုပ်ထားပေမဲ့ 1
ရုံးသုံးအိမ်သုံးအတွက် အကြမ်းခံပြီးအရည်အသွေးမြင့်တဲ့ Branded Desktop လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်❤️
Gamer တွေတအားကြိုက်တဲ့ Lenovo ရဲ့ Legion Y540 Gaming Series လေးကို Cashback Promotion ပေးနေပါပြီဗျာ🎉🎉 ဘယ်အမျိုးအစားတွေကို ဘယ်လို CashBack ပေးနေတာလဲ..? Legion Y540 GTX graphic နဲ့ကို Cashback 100 USD ...
ပါးပါးလေးနဲ့ ကြမ်းတဲ့ Lenovo ရဲ့ Thinkpad T590 💻💻 Lenovo ရဲ့ ThinkPad series တွေဆိုတာက military-grade အဆင့်ရှိတဲ့စမ်းသပ်မှုများစွာနဲ့ စစ်ဆေးထားပြီး အကြမ်းခံတဲ့အပြင် အပူဒဏ်, အအေးဒဏ်တွေကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိတာကြောင့် နေရာဒေသမရွေး သယ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့နံပါတ် (၁) လုပ်ငန်းခွင်သုံး ၊ ဘက်စုံသုံး အကြမ်းခံဆုံး Series အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ အမှတ်တံဆိပ် လေးပါ😉 ဒီ Thinkpad T590 လေးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိပြီးအကြမ်းခံတာကြောင့် ဘယ်နေရာသွားသွား သယ်သွားလိုရတဲ့အပြင် Design ကလည်း ရိုးရိုးရှင
ယခင် ၃ သိန်းနီးပါးရှိတဲ့ Lenovo Tablet လေးကို
Thinkapad ကိုအားပေးကြမ်းတဲ့ပရိတ်သတ်လေးတွေရှိလား…❓ Thinkpad ကိုအားပေးကြမ်းတဲ့သူတွေဆိုသိမှာပါ
Customer တွေအရမ်းကြိုက်ကြတဲ့ Lenovo ရဲ့ Thinkcentre M720T Desktop လေးကို Discount ပေးနေပါပြီဗျာ🎉🎉🎉 Online Learning တွေလုပ်မလား……..❓
မိုးအေးအေးလေးမှာ Game ကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ကွေးမဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် Legion Y540 လေးရှိတယ်နော်💻💻💻 Gaming Laptop ဆိုပေမဲ့ Engineering သမားတွေ ၊ Editing သမားတွေတွက်လည်းသင့်တော်တဲ့ Laptopလေးပါဗျ✔️✔️✔️ Game အကြမ်းကြီးတွေလဲဆော့မယ် Engineering Software တွေလည်းသုံးမယ် ၊ Editing Software တွေပါသုံးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေစေဖို့တွက် GTX , RTX Graphic Card အမြင့်စားတွေကိုသုံးထားပေးတယ်👍👍👍
Laptop လိုသုံးမယ် ✅
ကလေး Online Learning လုပ်ဖို့အတွက် Computer တစ်စုံလိုက်ရှာနေတာလား👌
Lenovo All In One A340 (i3) လေးကို ၀ယ်ယူရင် Targus Incognito Backpack လေးလက်ဆောင်ပေးနေပြီဗျာ🎉🎉 All In One PC ဆိုတာ ကတော့ System ပုံးကြီးမပါတော့ဘဲ Monitor ထဲမှာပဲ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတန်ဆာပလာ တွေအကုန်ထည့်သွင်းထားတဲ့ Computer တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်😍 ကော်ဖီဆိုင် ၊ Store ဆိုင် ၊ Reception လိုနေရာတွေမှာ အများစုသုံးလေ့ရှိပြီး နေရာစားအတော်သက်သာကာ Smart ကျကျ ရှိစေပါတယ်😎
Lenovo Tab4 8” အတွက် အရမ်းတန်တဲ့ Discount ပေးသွားမယ့် 𝐋𝐞𝐧𝐨𝐯𝐨 ဇွန်လအထူး 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်😋 25 USD လျှော့ပေးသွားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် Tablet ဝယ်မယ့်သူတွေ လုံးဝ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ Promotion လေးပါနော်🤓 အိမ်မှာ ကလေးတွေအတွက် အပန်းပြေစေဖို့...
Design လှလှပပနဲ့ရုံးသုံး,အိမ်သုံး ဘက်စုံအသုံး၀င်မဲ့ Lenovo Tablet48”📱📱
𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐩𝐚𝐝 𝐕𝐬 𝐈𝐝𝐞𝐚𝐩𝐚𝐝 အားလုံးလဲ သိချင်နေကြမယ် ထင်ပါတယ်။
Gaming Laptop မှ လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် အလန်းစား Legion Y540 ရှိနေမယ်နော်😋 Gaming အတွက်သာမက Engineering Software တွေ အသုံးပြုမယ့်သူတွေရယ် ၊ Graphic Design သမားတွေပါ အဆင်ပြေစေဖို့ GTX , RTX Graphic Card အမြင့်စားတွေနဲ့ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်😎 ဂိမ်းအကြမ်းကြီးတွေလဲဆော့မယ် ။...